i-nickel ebhulashiwe isibambo esisodwa sepayipi lokugezela
Ikhaya / Amanzi okugeza / Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa / WOWOW 3 Hole 4 Inch Centerset ompompi
Isikhuhlu sesakhiwo se-faucet esenziwe nge-nickel isitayela se-classic Retro: Iminwe yeminwe mahhala, ibekezelela ukuvela
Ideski ebekiwe ifenisha eyize Iyamukeleka ngokuqashwa kwekhaya, ikhondinium entsha, ifulethi elilodwa, ikhaya lezimoto, i-trailer yokuhamba, nokusetshenziswa kwasendlini.
2320700 imiyalo yokufaka
ifenisha yokugeza yokugezela eyi-nickel 2320700:
Gcina imali namanzi kuwe: eyakhelwe ku-aerator eyi-1.2kupm, enikeza ukuhlangana okuntofontofo kokugeza, okungenani ngamanzi angaphansi kwamaphesenti angama-20 kunokujwayelekile, okonga imali yakho ngaphandle kokuyekethisa ukusebenza.
Ukuhlanzeka ukusebenzisa umhlangano wokukhipha kuwo kufakiwe: ukuthi isikebhe sokugeza esigcwalisiwe sifaka umhlangano wensimbi, amanzi aqhamuka echibini lokucindezela ngokucindezela isigxobo selifti, ukuvikela ukugoqa izandla zakho ezigeziwe.
I-capsule ye-ceramic-ye-Drip-free: eyakhelwe phezulu lokufaka uphawu lobumba lobumba, ijikeleza kahle ukuze iqinisekise isilawuli sokushisa samanzi esinembile nokusetshenziswa kwesikhathi eside ngaphandle kokudonsa
Vikela ukusebenzisa: wonke ompompi wokugeza wamalayisense anelayisense ngathi, nsf61-9, ab 1953 amazinga okuhola mahhala ebhizinisini. Umzimba wesikulufu esenziwe nge-faucet wenziwa ngensimbi egcwele, inamandla futhi ihlala isikhathi eside.
Iwaranti yempilo ekhawulelwe: sinikezela ngesiqinisekiso seminyaka emi-3 maqondana nokuvuza, ukudonsa, ukwaphuka, kanye nokuqeda amaphutha.
Isikhiphi sendawo yokugezela yesikhungo sangaphansi sidlulise isivivinyo sokufafaza ngosawoti, okusho ukuthi simelana nokugqwala.
Umkhiqizo awusoze wakhiqiza izinkinga ze-tuli.
Azikho izimbambo, imihuzuko, noma amabala ebusweni bayo.
I-Electroplated iphelele, umkhiqizo awutholi i-oxidization.
SKU: 2320700 Categories: Amanzi okugeza, Amafulethi Wokugezela Elingashintshiwe Owodwa Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Classic, Hlanganisa, i-lavator
5.3 x 6 x amasentimitha angu-6.7
Zinc ingxubevange / Brass / Insimbi engagqwali
Idizayini engu-3 hole 4 intshi ye-centeret design
I-NSF ceramic disc valve, xuba amanzi, i-3-hole 4 in. I-centeret design, kulula ukuyifaka, isibambo esingu-1 silawula amanzi ashisayo nabandayo, i-satin nickel
I-WOWOW Automatic Soap Dispenser Wall Mount